Maraykanka, 08 October 2019
Talaado 8 October 2019
Trump oo ku hanjabay burburinta dhaqaalaha Turkey
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka aysan hor is-taagi doonin Turkish-ka oo la filayo inay weeraraan Kurdish-ka Syria, hase yeeshee waxa uu ku hanjabay inuu burburin doono dhaqaalaha Turkiga, haddii ay ku fogaadaan.
Wiil Kale oo lagu Dilay Minnesota
Waxaa shalay magaalada Minneapolis lagu aasay wiil Soomaaliyeed oo labadii bishan lagu dilay isla magaaladaasi, iyadoo mid kalana la dhaawacay. Dadkii geystay dilka iyo dhaawaca labadaasi wiil ayaan ilaa iyo hadda faro lagu soo dhigin
Mareykanka iyo Yurub oo qarka u saaran dagaal ganacsi
Midowga Yurub ayaa ka digay in haddii Mareykanka ku dhaqaaqo inuu canshuuro dheeri ah saaro badeecadaha Yurub, in Midowga Yurub “aysan u furnaan doonin wax aan ka ahayn inay sameeyaan tallaabo taas la mid ah.”
Trump oo sheegay inuu socdo 'Afgambi' ka dhan ah
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyey baarista ku socota ee hoggaamin karta xil ka-xayuubinta, wuxuuna ku qeexay “afgambi" ka dhan ah.
Qoraalka wada-sheekeysigii Trump iyo Zelensky oo la baahiyey
Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa maanta baahiyey qoraalka wada sheekeysi taleefon oo dhex-maray madaxweynah Donald Trump iyo dhiggiisa dalka Ukraine Volodymyr Zelensky, 25-kii July, kaasi oo xaqiijiyey in Trump uu Zelensky weydiistay inuu baaro mucaaradkiisa siyaasadeed, Joe Biden.
Trump oo lagu billaabay baaris horseedi karta xil ka-xayuubin
Afhayeenka Congress-ka Maraykanka Nancy Pelosi ayaa shaaca ka qaadday in ay si rasmi ah uu u billowday baaris horseedi kart xil ka-xayuubin oo lagu sameynayo Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Trump: Dagaal ma Dooneyno
Madaxweynaha Maraykanka D. Trump ayaa Talaadadii shalay sheegay in Maraykanku aanu dooneynin in dal kale uu khilaaf dhex maro, isla markaana aanu ka laba labeyeyn doonin in uu danaha Maraykanka difaaco
Iiraan oo Digniin u Dirtay Mareykanka
Madaxweynaha Iiraan Hassan Rouhani ayaa sheegay Axaddan in joogitaanka ciidamada shisheeye ee aagga gacanka Persian ay abuuri doonaan "xasillooni darro ka jirta gobolka."
Trump 'oo caawinaya' xulufadiisa Sacuudiga
Dowladda Mareykanka ayaa diyaarineysa inay jawaab ka bixiso weerarka “aan caadiga ahayn” ee lagu qaaday xarumaha shidaalka Sacuudiga, ayada oo madaxweyne Trump uu sheegay in ay u badan tahay in Iran ay mas’uul ka tahay.
Trump oo tusmeeyey qorshaha weerar ka dhan ah Iran
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay qoryahooda cabeysteen una diyaar yihiin inay ka jawaabaan weerarkii lagu qaaday mid ka mid ah goobaha ugu weyn shidaalka dalka Sacuudiga.
Trump oo xaqiijiyay dilka wiilka Osama Bin Laden
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta xaqiijiyay dilka Hamza Bin Laden oo ahaa wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee Al Qacida, Osama bin Laden.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa sheegay inuu rumeysan yahay in hoggaanka Iran ay doonayaan inay la kulmaan, taasi oo sare u qaaday rajada ah inuu diyaarinayo kulan uu dhiggiisa Iran kula yeesho kulanka guud ee QM ee bishan.